Panguin: Jereo ny fiantraikan'ny fanovana Algorithm Google | Martech Zone
Panguin: Jereo ny fiantraikan'ny fanovana ny Algorithm Google
Alakamisy 22, 2012 Alarobia, Novambra 21, 2012 Douglas Karr
Indraindray ireo fitaovana tsotra no sarobidy indrindra. Indraindray dia manontany tena ny mpanjifanay raha nisy fiatraikany na tsia tamin'ny fiovana algorithm izay mbola tohizin'i Google. Tsy miraharaha ny momba azy ireo toa ny taloha intsony isika - amin'ny fahitsiana nihatsara ny algorithma tsara tokoa ny hifantohanay bebe kokoa amin'ny fanoratana atiny tsara kokoa ary hiantohana fa mora ny mizara.
Raha te hitandrina tsara ny algorithm ianao, tsy tsara ve ny manaparitaka ireo fanavaozana algorithm hafa amin'ny fivezivezena fikarohana nataonao mba hahitana raha nisy fiatraikany? Izany indrindra no nomen'i Barracuda ny fitaovany Panguin. Midira amin'ny fitaovana, safidio ny Analytics kaonty izay tianao hofakafakaina, ary ny fitaovana dia mametaka ny fivezivezena amin'ny fikarohana organika anao miaraka amin'ny datin'ny Google Panda, Penguin ary ireo fanovana algorithm hafa manan-danja.
Araka ny hitanao dia nilentika tamin'ny famotsorana Penguin Exact Match izahay. Niady tamin'ny domains hafa nangalatra ny atinay izahay ary niantoka ny fitarihan'ny faritra fonenanay araka ny tokony ho izy. Tianay antoka fa tsy manana domains any izahay miaraka amin'ny atiny misy atiny avo roa heny izay avy aminay.
Erin sy ny ekipany matihanina SEO ao amin'ny Paikady momba ny tranokala namadika ahy tamin'ity fitaovana ity nandritra ny seho isan-kerinandro, Edge an'ny Radio Web - mpanohana ny seho izahay.
Tags: algorithmgoogle algorithmgoogle algorithm miovagoogle pandagoogle penguinpandàvorondrano
Fahazarana miantsena amin'ny finday manerana an'izao tontolo izao